म्याराथन टोली जापान प्रस्थान – Khel Dainik
काठमाडौं (खेलदैनिक) । मित्र राष्ट्र जापानको ओसाकामा आयोजना हुने बिश्वस्तरिय ओसाका म्याराथन २०१८ मा सहभागी हुन ४ सदस्यिय नेपाली टोली मंगलबार त्यस तर्फ प्रस्थान गरेको छ । नेपाली टोलीलाई शुभकामना प्रदान गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्टले एक कार्यक्रमविच बिदाई गरे ।
नेपाल सरकारको सहयोग तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र डा. खगेन्द्र स्पोर्टस् फाउन्डेशनको ब्यवस्थापनमा सहभागी हुन जाने नेपाली टोलीमा टिम ब्यवस्थापकमा रजत श्रेष्ठ, प्रशिक्षकमा बैकुण्ठ मानन्धर र खेलाडी द्वयमा धर्म महर्जन तथा पुष्प लाल श्रेष्ठ रहेका छन् ।
“अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षण नभएता पनि नेपाली धावकहरुले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने छन् ” प्रशिक्षक बैकुण्ठ मानन्धरले बताए । बिगत १० बर्ष देखि डा. खगेन्द्र स्पोर्टस् फाउण्डेशनले खेल तथा खेलाडीहरुको बिकास तथा उत्थानमा हरदम प्रयास गर्दै आईरहेको संस्थापक अध्यक्ष डा. खगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठले जानकारी गराए ।
← सन्दिपले पाकिस्तान सुपर लिग खेल्ने पक्का साफ महिला च्याम्पियनसिप अर्को बर्ष नेपालमा हुने →
जिल्ला लिगको विजेताले अझै पाएनन् पुरस्कार रकम । मंसिर ४, २०७५
एन्फाद्वारा आर्मी मुख्यालयमा रहेको चेन्जिङ रुमहरुको स्तरोन्नति मंसिर ४, २०७५
पाकिस्तान एफएले नियुक्त गर्यो स्पेनिस प्राविधिक निर्देशक मंसिर ४, २०७५
भुटान प्रिमियर लिगको मिति पनि तय मंसिर ४, २०७५
करोड मुल्यमा सन्दिपले सिपिएल खेल्ने तय मंसिर ४, २०७५
राखेपको सदस्य–सचिवमा ढकाल मंसिर ४, २०७५